မြန်မာ့အရေး လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆောင်ရွက်ချက် သံအမတ်ကြီးဝေဖန်
မြန်မာ့အရေး လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ ကိုင်တွယ်မှုဟာ အခုချိန်ထိ ထိရောက်မှုမရှိတဲ့အတွက် အားမရဖြစ်မိကြောင်း ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း က မအင်ကြင်းနိုင် က မေးမြန်းထားပါတယ်။
ဦးကျော်မိုးထွန်း ။. ။ မြန်မာ့အရေး တံခါးပိတ်အစည်းအဝေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျနော်တို့ အကြမ်းဖျင်းသိရသလောက် ကိုဗစ်ကိစ္စကို ဆွေးနွေးတယ်လို့ ကျနော်တို့ သိရပါတယ်။ နောက် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကိစ္စမှာဆိုရင် ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ လက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးချုပ်ကိုယ်တိုင် တင်ပြခဲ့တယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်။ လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ အစီရင်ခံတင်ပြသူတွေပဲ တက်ခွင့်ရတာဆိုတော့ အထဲမှာဘာတွေဆွေးနွေးလဲဆိုတာကိုတော့ ကျနော် အသေးစိတ်မသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အစည်းအဝေးက ဘာရလာဒ်ထွက်လည်းဆိုတဲ့ မေးခွန်းကတော့ ရှိနေပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အစည်းအဝေးမတိုင်ခင် ကျနော်သိထားတာက မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ရင် အမြဲတမ်း ဦးဆောင်ဦးရွက် လုပ်ပေးနေတဲ့ UK ကနေပြီးတော့ အစည်းအဝေးအပြီးမှာ သတင်းကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ဖို့ အတွက် ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတာကို အကြမ်းဖျင်းသိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း တချို့ ကန့်ကွက်တဲ့ သူတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် သတင်းကြေညာချက်ကို မထုတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းဝေးရှိလာပြီဆိုရင် ကျနော်တို့တွေက အမြဲတန်း မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားနဲ့ မျှော်လင့်ချက်ထားကြတယ်။ တခုခုများထွက်လာမလား မြန်မာနိုင်ငံအတွက် တခုခုများလုပ်ပေးနိုင်မလားပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတာကိုတော့ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း လုံခြုံရေးကောင်စီက ထိရောက်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုကို ကျနော်တို့ အမြဲတန်းမျှော်လင့်တယ်။ အခုထိတော့ Decisive Action ဆိုတာမတွေ့ရသေးဘူး။ ကျနော်တို့ပြည်သူတွေအမြဲတန်းပြောနေတာက ဒီ Statement တွေပဲ ထုတ်နေတာက Enough ဖြစ်နေပါပြီ။ တကယ်လိုချင်တာက Action ပါ။ ဒါကလည်း ရင်ထဲကလာတဲ့ စကားလုံးတွေပါ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ လုံခြုံရေ့းကောင်စီက လုပ်မပေးနိုင်တဲ့အပေါ်မှာတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။
အင်ကြင်းနိုင် ။.။အဲဒီမှာ ဗြိတိန် ဒုသံအမတ်ကြီးပြောသွားတဲ့ထဲမှာ အထူးသဖြင့် ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းဒဏ်ကို အလူးအလဲခံနေကြရတော့ လိုအပ်နေသူတွေအတွက် အလုံအလောက်ရရှိဖို့ရယ်။ ဒီလူသားချင်းစာနာမှုကိစ္စတွေမှာ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ အချိန်အတိုင်းအတာဘယ်လောက်အထိ ရပ်လိုက်ပြီးတော့ ဒီကူညီမှုတွေကို ခွင့်ပြုဖို့ဆိုပြီး မြန်မာစစ်ကောင်စီကို ပြောသွားတဲ့အပိုင်းပေါ့။ အခုလိုကူညီမှုအပိုင်းမှာ အခု NUG အစိုးရကလည်း ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးကိစ္စတွေ၊ လူသားချင်းစာနာမှုကိစ္စတွေမှာလည်း နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာရှိတဲ့အခါကြတော့ အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိစ္စတို့ကို NUG ဖက်ကရော မြန်မာစစ်ကောင်စီဖက်ကရော ဗြိတိန်သံအမတ်က ပြောသွားသလိုမျိုး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်အနေအထားရှိမလား ၊ နိုင်ငံတကာဖက်ကရော နိုင်ငံတွေအလိုက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ့်အနေအထားဘယ်လိုမျိုးရှိမလဲရှင့်။
ဦးကျော်မိုးထွန်း ။. ။ ကိုဗစ်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး UK သံအမတ်ကိုယ်တိုင်က ထောက်ပြသွားတာလည်းရှိပါတယ်။ အခု ကိုဗစ်အခြေအနေဆိုးဝါးသွားတာက စစ်ကောင်စီရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုကြောင့်ဆိုတာကလည်း အများကြီးပေါ်လွင်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ မလိုအပ်တဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့် အသက်တွေဆုံးရှုံးရတာရှိပါတယ်။ ဥပမာ အောင်စီဂျင်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ အောက်စီဂျင်ဝယ်လို့မရအောင် ကန့်သတ်ချက်တွေလုပ်တာတို့ တကယ်စိတ်မကောင်းစရာပါ။ တချို့ပြည်သူတွေ မလိုလားအပ်ပဲနဲ့ အသက်ပေးလိုက်ရတာရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲက ပါသွားကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ စစ်ကောင်စီရဲ့ စီမံမှုညံတာနဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးရရှိရေး ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် ဆရာဇော်ဝေစိုး ပြောနေတာရှိပါတယ်။ ကိုဗစ်ဟာက လိုအပ်တဲ့သူတိုင်းရဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ စကားက လက်တွေ့ကျပါတယ်။ လူတစုပဲ ရရှိပြီး ခွဲခြားမှုမရှိရပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံက လိုအပ်တဲ့ ပြည်သူတွေရဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကလည်း ကျနော်နားလည်သလောက် NUG အနေနဲ့ လည်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့အမြဲတန်းပြောနေတဲ့ လူအသက်ကယ်ဖို့က အဓိကပါဆိုတာရှိပါတယ်။ အဲဒါက အများကြီးအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့်မိုလို အခုလို လူအသက်ကယ်ဖို့ NUG ကဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ အပြည့်အဝနားလည်တယ်။ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ ဒီဖက်ကNUG ပြောတဲ့စကားကို သေသေချာချာ နားထောင်စေချင်တယ်။ ကျနော်တို့ မေတ္တာရပ်ခံထားတာကို အလေးနက်စဉ်းစားပြီ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးစေချင်တယ်။ တချို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်။
အင်ကြင်းနိုင် ။. ။ နယူးယောက်မြို့က ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်မိုးထွန်း ဖြစ်ပါတယ်။
မွနျမာ့အရေး လုံခွုံရေးကောငျစီရဲ့ ကိုငျတှယျမှုဟာ အခုခြိနျထိ ထိရောကျမှုမရှိတဲ့အတှကျ အားမရဖွဈမိကွောငျး ကုလသမဂ်ဂဆိုငျရာ မွနျမာအမွဲတမျးကိုယျစားလှယျ သံအမတျကွီး ဦးကြျောမိုးထှနျးကပွောကွားလိုကျပါတယျ။ဗှီအိုအေ မွနျမာပိုငျး က မအငျကွငျးနိုငျက မေးမွနျးထားပါတယျ။
ဦးကြျောမိုးထှနျး ။. ။ မွနျမာ့အရေး တံခါးပိတျအစညျးအဝေးနဲ့ ပတျသကျလို့ ကနြျောတို့ အကွမျးဖငျြးသိရသလောကျ ကိုဗဈကိစ်စကို ဆှေးနှေးတယျလို့ ကနြျောတို့ သိရပါတယျ။ နောကျ လူသားခငျြးစာနာမှုဆိုငျရာကိစ်စမှာဆိုရငျ ကုလသမဂ်ဂရဲ့ လူသားခငျြးစာနာမှုဆိုငျရာ လကျထောကျအတှငျးရေးမှူးခြုပျကိုယျတိုငျ တငျပွခဲ့တယျဆိုတာ သိရပါတယျ။ လုံခွုံရေးကောငျစီအဖှဲ့ဝငျနိုငျငံတှနေဲ့ အစီရငျခံတငျပွသူတှပေဲ တကျခှငျ့ရတာဆိုတော့ အထဲမှာဘာတှဆှေေးနှေးလဲဆိုတာကိုတော့ ကနြျော အသေးစိတျမသိပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ အစညျးအဝေးက ဘာရလာဒျထှကျလညျးဆိုတဲ့ မေးခှနျးကတော့ ရှိနပေါတယျ။ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ အစညျးအဝေးမတိုငျခငျ ကနြျောသိထားတာက မွနျမာနိုငျငံကိစ်စနဲ့ ပတျသကျရငျ အမွဲတမျး ဦးဆောငျဦးရှကျ လုပျပေးနတေဲ့ UK ကနပွေီးတော့ အစညျးအဝေးအပွီးမှာ သတငျးကွညောခကျြ ထုတျပွနျဖို့ အတှကျ ကွိုးစားခဲ့တယျဆိုတာကို အကွမျးဖငျြးသိရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့လညျး တခြို့ ကနျ့ကှကျတဲ့ သူတှရှေိတဲ့အတှကျကွောငျ့ သတငျးကွညောခကျြကို မထုတျနိုငျခဲ့ပါဘူး။ လုံခွုံရေးကောငျစီအစညျးဝေးရှိလာပွီဆိုရငျ ကနြျောတို့တှကေ အမွဲတနျး မွနျမာနိုငျငံကိုယျစားနဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြထားကွတယျ။ တခုခုမြားထှကျလာမလား မွနျမာနိုငျငံအတှကျ တခုခုမြားလုပျပေးနိုငျမလားပေါ့နျော။မွနျမာနိုငျငံနဲ့ပတျသကျပွီးဆှေးနှေးတာကိုတော့ ကွိုဆိုပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး လုံခွုံရေးကောငျစီက ထိရောကျတဲ့ဆောငျရှကျမှုကို ကနြျောတို့ အမွဲတနျးမြှျောလငျ့တယျ။ အခုထိတော့ Decisive Action ဆိုတာမတှရေ့သေးဘူး။ ကနြျောတို့ပွညျသူတှအေမွဲတနျးပွောနတောက ဒီ Statement တှပေဲ ထုတျနတောက Enough ဖွဈနပေါပွီ။ တကယျလိုခငျြတာက Action ပါ။ ဒါကလညျး ရငျထဲကလာတဲ့ စကားလုံးတှပေါ။ ဒါနဲ့ပတျသကျလို့ လုံခွုံရေ့းကောငျစီက လုပျမပေးနိုငျတဲ့အပျေါမှာတော့ စိတျမကောငျးဖွဈမိပါတယျ။
အငျကွငျးနိုငျ ။. ။ အဲဒီမှာ ဗွိတိနျ ဒုသံအမတျကွီးပွောသှားတဲ့ထဲမှာ အထူးသဖွငျ့ ကိုဗဈတတိယလှိုငျး ဒဏျကို အလူးအလဲခံနကွေရတော့ လိုအပျနသေူတှအေတှကျ အလုံအလောကျရရှိဖို့ရယျ။ ဒီလူသားခငျြးစာနာမှုကိစ်စတှမှော လကျရှိမွနျမာနိုငျငံမှာ ဖွဈနတေဲ့ ကိစ်စတှကေို မွနျမာနိုငျငံမှာ အခြိနျအတိုငျးအတာဘယျလောကျအထိ ရပျလိုကျပွီးတော့ ဒီကူညီမှုတှကေို ခှငျ့ပွုဖို့ဆိုပွီး မွနျမာစဈကောငျစီကို ပွောသှားတဲ့အပိုငျးပေါ့။ အခုလိုကူညီမှုအပိုငျးမှာ အခု NUG အစိုးရကလညျး ကိုဗဈကာကှယျရေးကိစ်စတှေ၊ လူသားခငျြးစာနာမှုကိစ်စတှမှောလညျး နိုငျငံတကာအဖှဲ့အစညျးတှနေဲ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနတောရှိတဲ့အခါကွတော့ အခုမွနျမာနိုငျငံမှာ ဖွဈပကျြနတေဲ့ ကိုဗဈကာကှယျဆေးကိစ်စတို့ကို NUG ဖကျကရော မွနျမာစဈကောငျစီဖကျကရော ဗွိတိနျသံအမတျက ပွောသှားသလိုမြိုး ပူးပေါငျးဆောငျရှကျကွမယျအနအေထားရှိမလား ၊ နိုငျငံတကာဖကျကရော နိုငျငံတှအေလိုကျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမယျ့အနအေထားဘယျလိုမြိုးရှိမလဲရှငျ့။
ဦးကြျောမိုးထှနျး ။. ။ ကိုဗဈကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီး UK သံအမတျကိုယျတိုငျက ထောကျပွသှားတာလညျးရှိပါတယျ။ အခု ကိုဗဈအခွအေနဆေိုးဝါးသှားတာက စဈကောငျစီရဲ့ စီမံခနျ့ခှဲမှုကွောငျ့ဆိုတာကလညျး အမြားကွီးပျေါလှငျပါတယျ။ နောကျပွီးတော့ မလိုအပျတဲ့ ကနျ့သတျခကျြတှကွေောငျ့ အသကျတှဆေုံးရှုံးရတာရှိပါတယျ။ ဥပမာ အောငျစီဂငျြကိစ်စနဲ့ ပတျသကျလို့ အောကျစီဂငျြဝယျလို့မရအောငျ ကနျ့သတျခကျြတှလေုပျတာတို့ တကယျစိတျမကောငျးစရာပါ။ တခြို့ပွညျသူတှေ မလိုလားအပျပဲနဲ့ အသကျပေးလိုကျရတာရှိပါတယျ။ ကနြျောတို့ရဲ့ ဆှမြေိုးသားခငျြးတှထေဲက ပါသှားကွတာတှလေညျးရှိပါတယျ။ ဒါတှကေတော့ စဈကောငျစီရဲ့ စီမံမှုညံတာနဲ့ ကနျ့သတျခကျြတှကွေောငျ့ဖွဈပါတယျ။ ကိုဗဈကာကှယျဆေးရရှိရေး ပွနျကွညျ့လိုကျရငျ ဆရာဇျောဝစေိုး ပွောနတောရှိပါတယျ။ ကိုဗဈဟာက လိုအပျတဲ့သူတိုငျးရဖို့လိုတယျဆိုတဲ့ စကားက လကျတှကေ့ပြါတယျ။ လူတစုပဲ ရရှိပွီး ခှဲခွားမှုမရှိရပါဘူး။ မွနျမာနိုငျငံက လိုအပျတဲ့ ပွညျသူတှရေဖို့လိုပါတယျ။ ဒါကလညျး ကနြျောနားလညျသလောကျ NUG အနနေဲ့ လညျး သကျဆိုငျရာအဖှဲ့အစညျးတှနေဲ့ ထိတှဆေ့ောငျရှကျနပေါတယျ။ ကနြျောတို့အမွဲတနျးပွောနတေဲ့ လူအသကျကယျဖို့က အဓိကပါဆိုတာရှိပါတယျ။ အဲဒါက အမြားကွီးအရေးကွီးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မိုလို အခုလို လူအသကျကယျဖို့ NUG ကဆောငျရှကျနတေယျဆိုတာ ကနြျောတို့ အပွညျ့အဝနားလညျတယျ။ နိုငျငံတကာအသိုငျးအဝိုငျးအနနေဲ့ ဒီဖကျကNUG ပွောတဲ့စကားကို သသေခြောခြာ နားထောငျစခေငျြတယျ။ ကနြျောတို့ မတ်ေတာရပျခံထားတာကို အလေးနကျစဉျးစားပွီ လိုကျပါဆောငျရှကျပေးစခေငျြတယျ။ တခြို့နိုငျငံတကာအဖှဲ့အစညျးတှေ ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျနတေယျဆိုတာသိရပါတယျ။
အငျကွငျးနိုငျ ။. ။ နယူးယောကျမွို့က ကုလသမဂ်ဂဆိုငျရာ မွနျမာကိုယျစားလှယျ ဦးကြျောမိုးထှနျး ဖွဈပါတယျ။